Trano fitehirizana: Tantara an-tsary ho an'ny iPad | Martech Zone
Alakamisy, May 22, 2014 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Vao tsy ela akory izay izahay dia nanana webinar momba ny siansa momba ny tantara amin'ny namantsika tao Cantaloupe.tv. Tsy vaovao amin'ny varotra sy marketing izany, fa noho ny antony sasany dia tena nanomboka nanjary tsikaritra ihany tato ho ato ny taona. Ny mpanjifa sy ny mpividy raharaham-barotra dia niova ho mora kokoa hatrany rehefa misy ny fifamatorana ara-pihetseham-po eo amin'izy ireo sy ny marika tiany… fa mahaliana ny faharetan'ny media, script ary ny sery mampatahotra antsika amin'ny fahitalavitra sy tranonkala.
Mahafinaritra ny mahita sehatra mivoatra manampy ny mpivarotra hampivelatra ny tantarany fa tsy hiresaka momba ny tahiry na ny endri-javatra. trano firaketana dia malalaka iPad app manantena ny hanova an'io. Ny trano fivarotana dia mamela ny mpampiasa hanangana tantara avy amin'ny lahatsoratra, horonan-tsary ary sary, mampiditra atiny avy amin'ny loharano ao anatin'izany ny iPad Camera Roll, Dropbox, Flickr, ary Instagram.
Ny vokatr'izany dia ny fisehosehoana mahafinaritra izay mamaly ny fizahana tranonkala, finday ary takelaka. Raha manana ny rindrambaiko iPad ianao, tsy vitan'ny manangana sy manoratra ny tantaranao ihany, fa afaka mamaky ireo tantara vaovao novokarina niaraka tamin'ny Storehouse ihany koa ianao.
Ary koa, ny topi-maso ny tantara dia azo ampidirina anaty pejin-tranonkala. Ity misy ohatra iray:
Ny vokatra farany dia sary miaraka amin'ny mety tsy voafetra - manambatra ireo singa rehetra ary manampy amin'ny fahafaha-mankafy, mizara na manome hevitra momba ilay tantara nozaraina.
Tags: paomacantaloupe.tvDropboxFlickrInstagramiOSiPadfampiharana iPadFivarotana finday sy tablettemanaikyTantarafitantaranatakelaka